Rag miyaa tahay, da'daaduna ma u dhaxayaa qonton ilaa lexdan iyo sideed sano? Xaaladdas waxaa lagu siinaayaa fursadda inaad shaybaar iska qaado, kaasoo xiriir la leh cudurka kansarka ku dhaca qanjirka kaadihaysta ragga ee Gobolka Skåne ku nool. Warqad ayaa boostada lagugu soo diri doonaa. Waxaa iska qaadaysa shaybaarka dhiigga ee loo yaqaanno [PSA-prov]. Shaybaarka loo yaqaanno [PSA-prov] waxaa laagu xaqijin karaa jiritaanka kansarka ku dhaca qanjirka kaadihaysta ragga.
Dhawr sannadood ayay qaadan kartaa kahor inta fursadda shaybaar iska qaadista aan lagu siinin. Maadaama tirada dadka fursadda iska tallaalista la siin doono ay badan tahay, ayaa waxaa dhici karto in xilliyadaha fursadda ay kala duwan yihiin.
Warbixin dheeraad waxaad kala xiriiri kartaa 1177.se
Hab joogto ah iska baar cudurka kansarka ee ku dhaca brostaatada - Gobolka Skåne – ku qoran af-soomaali fudud